कहिलेकाँही पूरुष भएर जन्मनुमा धिक्कार लाग्छ - Nayabulanda.com
रोमन आचार्य ४ आश्विन २०७५, बिहीबार १६:३१ 196 पटक हेरिएको
सोमबार बिहान ६ः३० बजे अफिस पुग्दा पहिलो नजर कान्तिपुर दैनिकको एंकर न्यूजमा पर्‍यो । समाचारमा शिर्षक थियो ‘लखेट्दै लगेर बलात्कार’ । त्यहाँ दुईवटा समाचार थियो । त्यो समाचार ध्यान दिएर पढे । समाचारमा राजधानी काठमाडौंमा दिउँसै नातामा मामा पर्नेले उनका साथीहरुसँग मिलेर २१ वर्षे युवतीको सामुहिक बलात्कार भएको कुरा लेखिएको थियो । सँगै म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा नसालु पदार्थ सेवन गरेका तीन जना युवाले १५ वर्षीय बालिका बलात्कार गरेको समाचार लेखिएको थियो । मनमा चिसो पस्यो ।
पछिल्लो समय त युवतीमाथी आक्रमण नभएको दिन नै रहेन । आफ्ना छोरी बनाएर एसिड छर्कने पात्र , सम्बन्ध भित्रमा बलात्कारको प्रयास अब त लेख्दा लेख्दा हात गलिसके । यस्ता समाचार अखवारको प्रमुख समाचार नबनेको दिन छैन । वौद्धिक तप्काहरुले लेख्ने लेखको विषय नबनेको दिन छैन । राष्ट्रिय तथा मोफसलका पत्रिकाको सम्पादकीय नबनेको दिन छैन । रेडियो, टेलिभिजन अनलाईन सबैमा प्राथामिकतामा परेको छ यो विषय । तर किन न्यूनिकरण हुँदैन ? के केही वर्ष अघिसम्म बलात्कारका घटना हुँदैन थिए ? अहिले बलात्कारका घटना बढेका हुन् कि उजागर चाहिँ हुँदै गएको ? यो प्रश्नको जवाफ खोजि हुँदै जानेछ ।
नेपालीमा उखानै छ ‘‘रोग लागेर औषधी खोज्नु भन्दा रोग लाग्न नदिनु नै जाती’’ । निर्मला पन्तको घटना र परिस्थिती , राजधानीमा भएको दिनदाहडै घटना , मैना सुनुवार घटना लगायतका अन्य घटनाको पनि शुक्ष्म विष्लेषण गर्ने हो भने कानुनको बाटो मात्र हेरेर बस्ने समय छैन । अदालतमा मुद्दा लड्दा लड्दै धेरैले आत्मावल हारेका छन् । धेरै पिडित युवतिले मुद्धा फिर्ता लिएका छन् । नचाहाँदा नचाहाँदै मिलापत्र गरेका छन् । कयौले आत्माहत्या गरेका छन् ।
यसैकारण पनि आउनुहोस् अब परिवर्तनको सबुरुवात आफैबाट गरौं । समाजलाई थोरै परिस्कृत बनाऔं । बालबालिकालाई यौन शिक्षाको सुरुवात घरवाटै गरौं । अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई साथिसरह व्यवहारको थालनी गरौं । उमेर अनुसारको परिवर्तन र यसमा यौन चाहानाको आफ््ना भोगाइहरु आदानप्रदान गरौं । इन्टरनेट चलाइरहेको मेरो सन्तानले कस्तो शिक्षा लिदैछ , कस्ता साइडहरु हेर्दै छन् त्यसमा पनि अभिभावकले निगरानी गरौं । परिवर्तन कसैले लिएर वा ल्याइदिएर आउने विषय होइन । त्यसैले कानुन पनि सायदै चाहिदैन होला , जब समाज आफै शिक्षित हुन्छ भने । हो कानुन आवश्यक छ तर त्यो भन्दा अगाडि म तपाईं जस्ता पूरुष अनि महिला दिदीबहिनीहरु पनि शिक्षित हुन जरुरी छ । जब समाज शिक्षित बन्छ तब समस्या आफै आफै हल भएर जानेछ ।